SuperMap GIS waa bixiyaha adeegga GIS waqti dheer suuqa la record track tan iyo markii la aasaasay in tiro balaadhan oo ah xalka ugu fiican ee macnaha guud ee geospatial ah. Waxaa la aasaasay sannadka 1997, kooxo khubaro ah iyo cilmi-baarayaal ku caawinaya Samafalka Shiinaha ee Shiinaha, saldhigan ...
In 2013 waxaan samaynay noocyada joornaalada ee loogu tala galay beeraha geomatics, iyadoo loo adeegsanayo tixraac ay Alexa liiska. 5 sano ka dib waxaan soo cusbooneysiiyey. Sida aan horay u sheegnay, joornaalada yaryar ee jimicsiyadu way yaraadeen wax yar oo leh qaabka sayniska oo tilmaamaya wax badan oo ku saabsan horumarka farsamada
In 2 soo socda, 3 iyo 4 April ee sanadkan, la kulmi doontaa kooxda ka dhisan Amsterdam in farsamooyinka ugu muhiimsan ee geospatial. Waxaan tixraac in ay dhacdo caalami ah in meel maalmood 3, ayaa lagu qabtay sannadihii la soo dhaafay, loo yaqaan Geospatial World Forum 2019, madal wada halkaas oo madaxda beerta ku ...
Oracle waa Kaaliyaha Aasaasiga ah ee Forum 2019 Geospatial Forum
Amsterdam: Warbaahinta Geesta iyo Isgaadhsiinta waxay ku faraxsan yihiin inay soo bandhigaan Oracle oo ah Taageeraha Aasaasiga ah ee 2019 World Geospatial Forum. Dhacdadu waxay ka dhici doontaa 2 ilaa 4 ee April ee 2019 ee Taets Art & Event Park, Amsterdam. Oracle wuxuu bixiyaa adeegyo badan oo 2D iyo 3D ah oo ku salaysan OGC iyo ISO standards ee macluumaadka, xarfaha, macluumaadka weyn iyo dariiqooyinka daruuriga ah. Teknoolojiyadaan waxaa loo isticmaalaa ...
Forum Geospatial World - 2019
Gacaliye jaalle, Ma waxaad raadineysaa jarida-ku laayeen teknoolajiyada, wax soo saarka cusub oo xal u qiimo u mashruucaaga ama wanaajiyo hawlgalka aad maalin walba? Hormar ay dhowaan in industry ee geospatial oo dunida ku baahsan, waxay noqon doontaa oo lagu soo bandhigay Geospatial Forum Global 2019, kaas oo ka dhici doona 2 4 in 2019 ee April ...
5 Murtida iyo 5 xaqiiqooyinka isdhaafsiga BIM - GIS
Chris Andrews qoray wax qiimo leh waqti ah marxalad xiiso badan, marka ESRI iyo AutoDesk raadinaysaa qaabab dib loogu soo celin xog ah ee GIS inay qaabeeyaan qaab dhibtoonaya in ay di'i hababka caadiga ah BIM injineerinka, naqshadaha iyo dhismaha. Iyadoo article qaadataa aragti ka mid ah kuwan ...
Bentley, Leica iyo PlexEarth waxay ka mid yihiin billowgii ugu xiisaha badnaa bilawga bisha February ee 2019. Intaa waxaa dheer, waxaan muujineynaa in aan soo diyaarinnay 21 dhacdooyin xiiso leh oo ku jira habka, kaas oo bulshada oo dhan xirfadlayaashu ka qayb qaadan karaan. Qaar ka mid ah mawduucyada laga hadlayo dhacdooyinkan waa: BIM, GIS, PDI, Geostatistics, ...
3 4 April ee soo socota oo sanadkan 2019, Fairoftechnology - shirkad Isbaanish, ku salaysan ee Malaga, qabanqaabisaa cayn kasta oo technology- dhacdooyinka la xiriira waxaa ugu Yeedha oo dhan asxaabtii geoengineering inay ka qaybgalaan munaasabad weyn halkaas oo Waxay soo bandhigi doonaan casriyado badan oo sanadahan dambe ah. Fairoftechnology, ayaa leh dhowr ...
Kudar sawirada dayax gacmeedka iyo falanqeynta soo saaraha adoo isticmaalaya Landviewer
Sida ay timaado in la raadiyo xog gaar ah (AOI - Area oo xiiso leh) wixii macluumaad ah ee ka dareemayaal fog, EOS - Earth logu Sistem waa mid ka mid ah dhufto ee web ugu ballaaran loo isticmaalo; labada goobidda, xulashada iyo degsado images ka dhufto ee satellite. boosteejo waxa uu isku dhafan qaar ka mid ah qalab ka fiirsato dhawaan xogta da'ayeen, ...
Maqaalka MUNDO UNIGIS, Cali 2018: waayo aragnimada GIS ee sheega oo bedelaya ururkaaga
UNIGIS Latin America, Universität Salzburg oo University ICESI waa la siiyaa horumarinta raaxo wayn sannadkan, maalin cusub WORLD Forum UNIGIS, Cali 2018 dhacdo: waaya aragnimada GIS in caddeeyaan oo u beddesho ururkooda, on Friday 16 November ee Jaamacadda ICESI -Auditorio Cementos Argos, Cali, Colombia. Helitaanku waa bilaash. Sidaas ...
Bentley Systems waxay sameeyaan sharaf adag oo GIS ah marka ay iibsanayaan hay'addaXXUMX
2004 ka dib markii Bentley biiray XFM horumar cusub ay V8i, Bentley yimid keenidda awoodaha meel u gudubtay Geographics dardaarmay in Bentley Cadastre, PowerMap iyo BentleyMap. Si kastaba ha ahaatee, waxa uu had iyo jeer ahaa injineernimada farsamada, ad sidoo kale usii sare dalbaday by injineerada CAD, kormeerayaal xagga iyo injineero. ...
Su'aal aad u ballaaran oo kicin kara jawaabo badan, badankood xitaa dareen ahaan; isbeddel badan haddii ay tahay dhul ay la socdaan ama aan lahayn dhismo, adeegyo guud ama goobo caadi ah. In uu jiro bog ah oo aan ka ogaan karno qiimaha dhulka ee aag gaar ah oo magaaladeena ah, shaki la'aan ayaa noqon lahaa ...
Maanta waxaannu soo bandhigi doonaa ebooks iyo daabacaad si loo fahmo horumarka farsamada ee berrinka-mashruuca iyo saameynta ay ku leedahay nolol maalmeedka. Dhammaan xulashooyinka oo dhan waa bilaash oo si sahlan loo helo. Marka la eego koboca tiknoolajiyada ee tiknoolajiyada lagu dabaqo aagga juqraafi, waxaa muhiim ah in la sii wado si dib loo cusbooneysiiyo si ay shaqaalaheennu u sii wadaan ...
Boggii hore Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 ... Page 19 page Next